Nnukwu Ngwá Ọrụ iji Nchọpụta Nsogbu Usoro Nsuso Google | Martech Zone
Oh, ndị ahụ smarties na Google na ngwaọrụ ha niile! N’izu gara aga, onye ahịa nwere nsogbu ụfọdụ na nyocha Google Analytics ha, na-anwa ịkewaa ndị ọbịa abanyela na ndị na-abụghị. Isi ihe nchọpụta nsogbu ahụ bụ ịhụ na ihe omume ziri ezi na data na-agafe na Google. Egosiri m otu m ga-esi dozie nsogbu iji Network tab na Ngwaọrụ Mmepụta Google Chrome.
Offọdụ n'ime nyocha ndị ahụ bụ ntụpọ… na-ajụ ma ọ na-akwado Nchịkọta Universal (ọ na-ekwu na ọ na-eme). Anaghị ewelite anyị na Universal Analytics (mana) mana ọ na - egosi na ọ na - arụ ọrụ ọ dị m mma.
Tags: nchịkọta debuggergoogle nchịkọta debuggergoogle nchịkọta koodu nchịkọtagoogle Universal nyochanchọpụta nsogbu google Analytics